Covid-19 Allowances Archives - iHarare News `); });
Civil Servants US$75 Covid-19 Allowance Extended To December Zimbabwe's Government has delivered good news to civil servants concerning the US$75 Covid-19 allowances. Apex Council secretary David Dzatsunga said that the…
Pensioners To Get Bank Cards For USD$30 Covid-19 Allowances The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has assured pensioners over their USD$30 COVID-19 allowances. The central bank has announced that pensioners will get foreign currency…
Banks Deliver Bad News To Civil Servants Regarding US$75 Covid-19 Allowances Bankers Association of Zimbabwe has delivered bad news to civil servants regarding US$75 Covid-19 allowances. Bankers Association of Zimbabwe (BAZ)…
Guest Author	 Jun 30, 2020 0
Govt Fails To Pay US$75 COVID-19 allowance The government has not paid US$75 Covid-19 allowance for health workers. This was revealed by Health Services Board (HSB) chairperson Dr. Paulinus Sikhosana on Tuesday whilst giving oral…
Mnangagwa's Spokesperson Clarifies On Allowance President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, George Charamba has clarified on the US$75 and US$30 Covid-19 allowances which were awarded to civil servants and pensioners…